Pyae Sone | 12:58 AM | Android
iPhone တွေမှာ Jailbreak လုပ်ထားမှသာ စ်ိတ်ကြိုက် Crack App တွေ/ Myanmar Font တွေသွင်းလို့ ရသလို Android တွေမှာလဲ Myanmar Font တို့ ဘာတို့ သွင်းချင်ရင် root လုပ်ပေးရပါတယ်။ Android Phone တွေအတွက် ဖုန်းအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး root လုပ်နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်အခုတင်ပြမယ့် root လုပ်နည်းက z4root ကိုသုံးပြီး root လုပ်တဲ့နည်းလေးပါ။ Android Version 2.3.3 တွေကိုတော့ z4root နဲ့လုပ်လို့မရပါဘူး။ z4root ကဖုန်းတိုင်းနဲ့လဲ မကိုက်ညီပါဘူး။ z4root နဲ့ root လုပ်လို့ရမယ့် ဖုန်းအမျိုးအစားတွေကိုအောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါမယ်။
အဲဒီဖုန်းအမျိုးအစားတွေကိုပဲ z4root နဲ့ root လုပ်လို့ ရပါတယ်။
1. z4root App လေးကို အရင် download ဆွဲလိုက်ပါ။ (Download - z4root 3.0.1)
2. မိမိဖုန်းထဲမှာ z4root ကို install လုပ်ပါမယ်... မိမိ Android ဖုန်း၏ Menu တွင် File Manager ကို ရှာပါ။ ဝင်ပါ။ အဲဒီမှာ ခုနက ကူးထည့်ထားတဲ့ Z4root.apk မှာ တစ်ချက်နှိပ်ပါ။ Install လုပ်ပါ။ Install လုပ်ပြီးနောက် Application အား တန်းသုံးလိုပါက Open လုပ်နိုင်သလို Done မှာ နှိပ်ပါက Application ထည့်သွင်းမှု ပြီးဆုံးသွားပါမည်။
3. ဖုန်းထဲမှာ z4root ကိုဖွင့်လိုက်ပါ...
4. ဒီအဆင့်မှာ Root လုပ်ဖို့အတွက် ရွေးချယ်စရာ နှစ်ခုရှိပါမယ်။ Temporary Root နဲ့ Permanent Root ပါ။
Permanent root ကိုပဲရွေးပေးလိုက်ပါ။ Temporary Root ကိုရွေးပေးမယ်ဆိုရင် ဖုန်းကို Power ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ခဲ့ပါက root လုပ်ထားတာတွေအကုန်ပျက်သွားပါလိမ့်မယ်။
5. Permanent root ကိုရွေးပေးပြီး ဖုန်း root လုပ်နေချိန်ကိုခဏစောင့်ပါ။ ခဏနေရင် restart ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ Power ပြန်ပွင့်လာလို့ရှိရင် မိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Super User ဆိုတဲ့ App လေးတစ်ခုတိုးလာလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဖုန်းဟာ root လုပ်ပြီးသားဖုန်းဖြစ်သွားပါပြီ။
Root လုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ ကြိုက်ရာ Android Application တွေ၊ မြန်မာဖောင့်တွေ၊ မြန်မာလက်ကွက်တွေနှင့် တခြားကလိစရာတွေ အများကြီးထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဖုန်းက Root လုပ်ပြီးသုံးနေတာဆိုတာကိုလဲ မမေ့ပါနဲ့လေ...။ Root လုပ်ထားတော့ ကိုယ်ဘာလုပ်လုပ်အတားအစီးမရှိ ကလိလို့ရနေမှာပါ။ တချို့ System အပိုင်းတွေကို ထိခိုက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ စာရေးသူနှင့် မည်သို့မှ မသက်ဆိုင်ပါလေ...။ :)
Ref : Myanmar Mobile Development
အချိန် - 12:58 AM
US visa lottery opens for 2013 – ဂရင်းကတ် ကံစမ်းမဲ D.V Lottery စတင် လျှောက်ထားနိုင်ပြီ
Pyae Sone | 12:24 PM | News | သတင်း
ဂရင်းကတ် သို့မဟုတ် အမေရိကန်တွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရှိသူတို့ကို ထုတ်ပေးသည့် ကတ်ပြား
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ (၂၈) ရက်နေ့က အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ဗီဇာနဲ့ ကောင်စစ်ရေးရာ ဒုတိယလက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေးဗစ် ဒါနာဟယူး (David Donahue) ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တွေကို ဖိတ် ကြားပြီး ၂၀၁၃ Diversity Visa ကံစမ်းမဲဖောက်မယ့် အစီအစဉ်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီ အစီအစဉ်အကြောင်းနဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက် တွေကို Ko Ronnie Nyein က ဆက်ပြီး တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။၂၀၁၃ ခုနှစ် အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရဲ့ ပထမနှစ်ဝက် စက်တင်ဘာ (၃၀) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ၀င်ရောက်ရမယ့် ဒီ ၂၀၁၃ Diversity Visa ကံစမ်းမဲဖောက်ပွဲကို ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာ (၄) ရက်နေ့က စတင်ခဲ့တာပါ။ ဒီ ကံစမ်းမဲဖောက်ပွဲ ပိတ်ချိန်က ရှေ့လ နိုဝင်ဘာလ (၅) ရက် စနေနေ့၊ အမေရိကန် အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်း စံတော်ချိန် နေ့လည် (၁၂) နာရီ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ နိုဝင်ဘာ လ (၅) ရက် စနေနေ့ည (၁၀) နာရီခွဲအချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးထုပ် (သို့မဟုတ်) ခေါင်းပေါ်မှာ တခုခု ဆောင်းထားတာ မရှိရပါဘူး။ ဓာတ်ပုံထဲမှာ ဦးခေါင်းပိုင်းနဲ့ ပခုံးပိုင်းဟာ ဓာတ်ပုံတခုလုံးရဲ့ ၅၀%ကနေ ၆၉% ကြားမှာ ရှိရပါမယ်။ ဓာတ်ပုံကို သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့
https//www.dvlottery.state.gov/applications.aspx မှာ သွားပြီး လျှောက်လွှာ ဖြည့်ရုံပါပဲ။
လျှောက်လွှာမှာ ဓာတ်ပုံကို ချိတ်ဆက် (attach လုပ်) လိုက်ပြီး လျှောက်လွှာဖိုင်ကို အချက်အလက်တွေ အထပ်ထပ် ပြန်စစ်ပြီးရင် အောက်ဆုံးက submit ဆိုတာကို click လိုက်ပြီး၊ ပို့ရုံပါပဲ။ ဒါက တဦးချင်း လျှောက်လွှာတင်တာပါ။ မိသားစုနဲ့ တင်မယ် ဆိုရင်တော့ မိမိရဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်နဲ့ အတူ လာမယ့် နိုဝင်ဘာ (၅) ရက် နေ့မှာ အသက် (၂၁) နှစ် မပြည့်သေးတဲ့ မိမိရဲ့ သား သမီးများနဲ့ သားသမီးများရဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်များကိုပါ လျှောက်လွှာတွဲတင်လို့ ရပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကိုလည်း သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ချိတ်ဆက် (attach လုပ်)လိုက်ပြီး အောက်ဆုံးက submit ဆိုတာကို click လိုက်ပြီး လျှောက်လွှာပို့ရုံပါပဲ။ ပို့ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ လျှောက်လွှာလက်ခံရရှိမှု အတည်ပြုချက်ပေးတဲ့ စာမျက်နှာ confirmation page ကို၊ print ထုတ်ပြီး သိမ်းထားထို့ပါပဲ။
မူရင်း – ဗွီအိုအေ သတင်းဌာန
အချိန် - 12:24 PM
Pyae Sone | 6:16 PM | Software
ArtRage Studio Pro v3.5.0 Portable 78.18 MB
ပန်းချီဝါသနာရှင် သူငယ်ချင်းများအတွက် ဆေးဖိုး စုတ်တံဖိုး မကုန်ပဲ မိမိ စိတ်ကြိုက်ဆွဲနိုင်ဖို့ရာ ဒီဆော့ဖ်ဝဲရ်လေးကို ရှာဖွေတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲရ်လေးဟာ Portable ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်….။
အချိန် - 6:16 PM
၁၉၈၈ ခုနှစ် ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံ မှတ်တမ်းတခု
Pyae Sone | 3:13 PM | video
အချိန် - 3:13 PM
Internet Download Manager V6.07 Build5Portable
Pyae Sone | 2:09 PM | Software
Internet Download Manager V6.07 Build5Portable (8.9 MB)
Internet Download Manager Portable လေးပါ Download manager တွေက အများကြီးပဲ၊အဲဒီအထဲမှာမှဒါလေးက ပေါ့ပေါ့လေးနဲ့ မြန်လည်းမြန် ကောင်းလည်း ကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် မိမိနှစ်သက်ရာ လင့်ခ်မှတဆင့် ဒေါင်းလုပ်ရယူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...။
အချိန် - 2:09 PM
DriverEasy Professional 3.10.0 Portable Final
Pyae Sone | 10:27 PM | Software
DriverEasy Professional 3.10.0.26694 Multilingual Portable | 3.16 Mb
Windows XP, Vista,7သုံးသူများအားလုံးအတွက် တကယ်လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ် လက်ရှိကျနော်လည်းသုံးနေပါတယ်…။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲရ်လေးဟာ Drivers အခက်အခဲရှိသူများအတွက် မိမိစက်မှာလိုအပ်နေတဲ့ Drivers များကို ရှာဖွေဖော်ပြပေးပြီး အင်တာနက်မှာဒါရိုက် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်…။ အဆင့်သုံးဆင့်ပဲလိုအပ်ပါတယ်… ပထမအဆင့် Scan Now, ဒုယအဆင့် Get Drivers, တတိယအဆင့်အနေနဲ့ Download all ဆိုပြီးမိမိစက်ထဲမှာလိုအပ်နေသော Drivers များကို အင်တာနက်မှတဆင့် ဒေါင်းလုပ်ရယူပေးပါတယ်…။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲရ်ဟာ Portable ဖြစ်တဲ့တွက် Serial key မလိုပါဘူး သုံးရတာလည်း အရမ်းကိုပေါ့ပါးလွယ်ကူပါတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲရ်တစ်ခုချင်းစီမှာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုယ်စီရှိပါတယ် သုံးကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်မယ်ဆိုရင် အောက်တွင်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်..။
အချိန် - 10:27 PM
မမေ့နိုင်သော ၁၉ ဂျူလိုင်
Pyae Sone | 5:02 PM | ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ စကားတွေ… ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ၀ါဒတွေ တည်ထွန်းနေသမျှ ဗိုလ်ချုပ် တကယ်မသေနိုင်သေးပါ…. ဗိုလ်ချုပ်ကိုချစ်သူတွေ ရိုသေသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်….
ထို့ကြောင့် ကျနော်တို့တွေ… ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ၀ါဒတွေ၊ လမ်းစဉ်တွေကို ဆက်လက်ပြီးတော့ အသက်သွင်းကြရမယ်..….
`အာဏာရှင်ဝါဒ၊ လူမျိုးအချင်းမုန်းတီးရေးဝါဒ၊ စစ်တပ်ကသာ လွှမ်းမိုးရမည်ဆိုတဲ့ ဖက်ဆစ်အာဏာရှင်ဝါဒ၊ မင်းစိတ်ပေါက်နေတဲ့ အရာရှိတွေ ချယ်လှယ်တဲ့ စနစ်ဆိုးမျိုးရှိနေလျှင် အများပြည်သူတို့ဆန္ဒနှင့် လုပ်ကိုင်ရတဲ့ ဒီမိုကရေစီဝါဒခေတ်မစားနိုင်တဲ့ ဖက်ဆစ်ဝါဒ ဆင်တူရိုးမှား ပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်။ ဒီဝါဒမျိုးပေါ်လာရင် ပြည်သူလူထုဟာ လွတ်လပ်ရေး ဆိုတာမရနိုင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အားလုံး ဒီမိုကရေစီဝါဒကို ခေတ်စားလာအောင်လုပ်ရမယ်။ အဲဒီဝါဒမျိုးရအောင် လွတ်လပ်တဲ့ ဗမာနိုင်ငံ ထူထောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်။´
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား ဦးညွှတ်အလေးပြုလျှက်
အချိန် - 5:02 PM
Trojan Killer 2.0.9.6 Portable
Pyae Sone | 5:42 PM | Software | Virus
Trojan Killer 2.0.9.6 File Size: 33.57MB
ဗိုင်းရပ် ဆော့ဝဲရ်လေးဟာ Portable ဆော့ဝဲရ်ဖြစ်တဲ့အတွက် USB ထဲထည့်သိမ်း၍ မိမိအသုံးပြုချင်တဲ့အချိန်တွင် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်… မိမိစက်ထဲကို Run စရာမလိုတဲ့အတွက် အချိန်ကုန်သက်သာတယ် Serial Key မလိုတဲ့အတွက် ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် သူငယ်ချင်းများလည်း ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်…။
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်တွင် မိမိနှစ်သက်ရာလင့်ခ်တွင် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်…။ အဆင်မပြေခဲ့ရင် comment ထားခဲ့ပါ…။
အချိန် - 5:42 PM
Pyae Sone | 11:16 AM | Face book | Software
Facebook Founder Zuckerberg က Facebook Conference မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Video chat က Facebook တခုဘဲကလုပ်တာ မဟုတ်ဘဲ Skype နဲ့ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Facebook ကနေ တရားဝင်လုပ်လိုက်တဲ့ Video Chat ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလည်းဆိုတာကို ပုံဖြင့် တဆင့်ခြင်းပြသထားပါသည်။ မသဲကွဲပါက အကြီးချဲ့၍ကြည့်ပါ...။
Get Started ကိုကလစ်လိုက်ပါ..။
ပြီးလျှင်မိမိ ဗွီဒီယိုချက်ဖြင့် ခေါ်မည့်သူကို ကလစ်လိုက်ပါ..။
ပုံပါအတိုင်း ဗွီဒီယို အိုင်ကွန်လေးကိုကလစ်ပြီးခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်...။
မိမိခေါ်မည့်သူရဲ့ ဆိုဒ်မှတဆင့်လည်း အောက်မှာပြထားသည့်ပုံအတိုင်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်...။
အထက်ပါ အဆင့်အတိုင်းအဆင်မပြေလျှင် အောက်ကလင့်အတိုင်း facebook plugin ကို Download လုပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ပါ....။
အချိန် - 11:16 AM
Pyae Sone | 7:55 PM | video | သီချင်း
တေးရေး... Sang Pi (စံပီး)
♫ ♪ ကြင်နာစွာ ချော့သိပ်ခြင်းတွေ မပြုအားလည်း လိုအင်တွေကို ဖြည့်စွမ်းပေးကာရယ်....
ကြုံလာမဲ့ လူ့လောကြီးထဲ လမ်းမမှားရန် အဖေဟာ တည့်မတ်ပေးတယ်...♫ ♪
ချိုသာတဲ့ စကားလုံးလေးတွေ သီကုံးကာ တစ်ခါတစ်ခါမှာ မပြောဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်...
မြင်နေတဲ့ မျက်ဝန်းများထဲက စကားလုံးတွေ ဒီရင်ထဲ ခံစားချက် နားလည်......♫ ♪
♫ ♪ ♫ ဖေဖေ... ကျေးဇူးပဲ အဖေ... ပြောလိုက်ရုံနဲ့ လုံလောက်မယ် မထင်ဘူးလေ.....
ဖေဖေ့ ကျေးဇူးကြောင့်သာ အခုဘဝအရွယ်ထိ ရောက်ခဲ့ပြီလေ... ♫ ♪ (ဖေဖေ... တကယ်ကျေးဇူးတင်လို့ မဆုံးဘူးလေ...) ♫ ♪
ခိုင်မာတဲ့ တောင်တန်းရဲ့အထက်မှာ ပွင့်လန်းတဲ့ ရောင်စုံဝေဆာ ပန်းကလေးများလိုပဲ...
ခိုင်မာတဲ့ ဖေ့ဖေ့ရဲ့ ပွေ့ဖက်မှုအောက်မှာ ရှင်သန်နေထိုင် ကြီးပြင်းခဲ့ပြီ...
ရာသီတွေ ပြောင်းလဲသွားကာ အိုမင်းလည်း အချိန်ရှိတိုင်း ဒီသားသမီးအတွက်ဆိုရင်...
အနွံတာခံ ချစ်ခြင်းနဲ့ အဖေ့ရဲ့အေးရိပ်ဟာ နောင်လာမယ့် နှစ်ပေါင်းများအထိတိုင်..... ♫ ♪ ♫ ♪
ရောက်ရာဘုံဘ၀ကနေ သာဓုခေါ်သံကြားနိုင်ပါစေ အဖေ….
အဖေများနေ့ (၁၉.၆.၂၀၁၁) တနင်္ဂနွေနေ့ ဘုရားကျောင်းတွင် သီဆိုမည့် ချင်းတောင်းလေးရေ… သီချင်းနဲ့ စာသားလေးတွေကို အပင်ပန်းခံပို့ပေးအတွက် ကျေးဇူးပါ…. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ….။
အချိန် - 7:55 PM
Daw Aung San Suu Kyi Birthday and Invitation
Pyae Sone | 5:12 PM | မွေးနေ့အမှတ်တရ
Graphic Design- Pyae Sone
အချိန် - 5:12 PM
Pyae Sone | 12:48 AM | Software
VSO Convert X to DVD ဆော့ဖ်ဝဲရ်နှင့်အတူ Full version အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်အတွက် Keygen ဖိုင်လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်...။ အသုံးပြုလို့ရမည့် input formats ဖိုင်များနှင့် output formats ဖိုင်များ အောက်တွင်ပေါ်ပြပေးထားပါတယ်....။ အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ....။
အချိန် - 12:48 AM
Pyae Sone | 3:08 PM | Software
ဒီဆော့ဖ်ဝဲရ် လေးကိုသိပြီးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Nero ကိုပဲ နှစ်သက်သူများအတွက် ဒီ Nero Burning 10.5 ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါ....ဒီဆော့ဖ်ဝဲရ်လေးကတော့ Data, Video, Photo, Audio တို့ကို Burn နိုင်ခြင်းနှင့် BackUp လုပ်ခြင်းစသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲရ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်....ဒီ Nero Burner ကို သုံးပြုချင်တဲ့သူတွေအတွက် စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုလို့ရအောင် Serial Key ပါတခါတည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်... စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ်....။
အချိန် - 3:08 PM
Pyae Sone | 1:34 PM | Software
သူငယ်ချင်းများရဲ့ တောင်းဆိုချက်အရ နောက်ဆုံးထွက်ရှိသော Ashampoo Burning software ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။ REGISTRATION ENTRIES Crack ဖိုင်နှင့်အတူ Keygen ကိုပါတွဲ၍ထည့်ပေးထားပါတယ်...။ပထမဦးစွာ ashampoo_burning_studio 10 10.0.1 .exe ဖိုင်ကိုအရင် အင်စတောလုပ်ပါ ပြီးလျှင် အဲဒီပရိုဂရမ်ဖိုင်ကို ပိတ်လိုက်ပါ...။ ပြီးလျှင် REGISTRATION ENTRIES Crack ဖိုင်ကိုဖွင့်ပါ ပြီးလျှင် မိမိအသုံးပြုသော စက်သည် OS 64 bit system ဆိုလျှင် regx64.reg (64bit)double click ပါ..။ မိမိအသုံးပြုသော စက်သည် OS 32 bit ဆိုလျှင် regx86.reg (32bit) ကို double click ပါ...။ Your unlimited full version is now activated ! အသုံးပြုသူများ နှစ်သက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်...။
အချိန် - 1:34 PM
Pyae Sone | 5:05 PM | Software
Windows7အသုံးပြုသူများအတွက် Windows 8 Ultimate skin pack Theme ဖြစ်ပါတယ်...။ အသုံးပြုနည်းကတော့ windows 8 Skin Pack 1.0.exe ဖိုင်ကို Double Click ၍ instrall လုပ်ပြီး restart လုပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါသည်။ ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
အချိန် - 5:05 PM
Pyae Sone | 9:47 PM | အတွေး အရေး
သင်္ကြန်.. “သင်္ကန္တ” ဟူသော ပါဠိဘာသာနှင့် “ သကြံင်္န္တ” ဟူသောသက္ကဋဘာတို့မှ ဆင်းသက်လာသော ဝေါဟာရဖြစ်ပြီး ကူးပြောင်းခြင်းဟူသော အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်စက္ကန့်၊ တစ်မိနစ်မှ တစ်နာရီ၊ တစ်ရက်၊ တစ်လ စသည်အားဖြင့် ပြောင်းလဲရင့်သန်လာခြင်းသည် ကူးပြောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ဆယ့်နှစ်လပြည့်သော် တစ်နှစ်ဟောင်းချိန်ဖြစ်လျက် တစ်နှစ်သစ်ရန်တာဆူရပေမည်။
ထိုသို့ တစ်နှစ်အို၍ တစ်နှစ်ပျိုသည့် ကာလကို ကူးပြောင်းကာလ (သို့မဟုတ်) သင်္ကြန်အတာကာလ ဟုခေါ်တွင်သမုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ တန်းခူးလသည် သက္ကရာဇ်ဦးခေါင်းပြောင်းတော့မည့်လ ဖြစ်ရာ နှစ်ဟောင်းမှ အညစ်များသည် နှစ်သစ်သို့ပါလာရန် မသင့်ပေ၊ လူတို့အနေအထားအရဆိုသော် နှစ်ဟောင်းမှ စွန်းထင်းပေကျံလာသော ဒုစရိုက်မှု၊ အပြစ်အညစ်အကြေးများသည် အနာတ်ဂတ်နှစ်ဆန်းသို့ လိုက်ပါလာမှုကို လိုလားကြမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင်္ကြန်၏ သဘောသရုပ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်လျှင် နှစ်ဟောင်းမှ မလိုလားအပ်သော ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဘ၀အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို သံယောဇဉ်ကင်းကင်းနှင့် စွန့်ပယ်၍ နှစ်သစ်တွင် အားမာန်သစ်များကို ဖွင့်လှစ်လိုက်သော အခါသမယပင်ဖြစ်သည်ဆိုရမည်။ နှစ်ဟောင်းမှအညစ်အထေးမှန်သမျှကို သန့်စင်ကြည်လင်သော သင်္ကြန်ရေနှင့် ဆေးကြောပစ်ခြင်းဖြစ်နှစ်သစ်ကာလအတွက် ရွှင်းလန်းတက်ကြွမှု၊ ချမ်းမြေ့သာယာမှုစသော အလုပ်သုံးပါးတွင် ရှေ့နောက်ကြောင်းကျိုးညီညွတ်မှုသဘောကိုဆောင်ယူလေသည်။
ကူးပြောင်းခြင်းသဘောဆောင်သည့်အတာသင်္ကြန်ကို သင်္ကြန်ပန်းဖြစ်သည့် ပိတောက်ပန်းသည် ပြောင်းလည်းခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည့် သင်္ကေတပန်းဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့တွေသည် ၀င်းဝါသော ပိတောက်ရွှေဝါရိပ်မှာပင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ရေပက်ဖြန်းကစားခဲ့ကြသလို ရေ၏သန့်စင်ခြင်း သဘောက နှစ်ဟောင်းမှ အညစ်အထေးများကို ဆေးကြောရာရောက်သည်။ ရေ၏အေးမြခြင်း သဘောက နှစ်သစ်ကို မေတ္တာဖြင့် ကြိုလိုက်သည့်နိမိတ်ဖြစ်သည်။
လွမ်းတမ်းတနေရုံမှ အပ ဘာမှ မတတ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေ့တွေပါ...။
Pyae Sone | 8:34 PM | Software
သူငယ်ချင်းများအားလုံး ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကို အားလုံးသိပြီးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက်ကြောင့် အထူးတလည် ရှင်းပြရန်မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ Adobe Acrobat X Pro 10.0.2 ကို Full Version အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် KeyGen နဲ့အတူတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်ရလွယ်ကူစေရန် ဒါရိုက်လင့်နဲ့တင်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။
အချိန် - 8:34 PM
Pyae Sone | 6:08 PM | Software
သူငယ်ချင်းများ အားလုံးအတွက် Microsoft Office Professional Plus 2010 OS 32 bit and 64 bit ကို သူငယ်ချင်းများအားလုံး အဆင်ပြေအောင် Direct Link လေးနဲ့ ဒေါင်းလုပ်ရလွယ်အောင်တင်ပေးထားပါတယ်။ KMS Activator ကို အသုံးပြုပြီး Full Version အဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ MS Office 2003 / 2007 တွေအသုံးပြုနေသူများအနေနဲ့ နှစ်သက်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်…။ KMS Activator ကိုအသုံးမပြုခင် မိမိဖွင့်ထားသော Miscrosoft office ပိတ်လိုက်ပါ နောက်ပြီး Virus Program ကို Disable လုပ်ပြီးမှ Activator ကိုအင်စတောလုပ်ပါ….။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ...။
Microsoft office professional plus 2010 for OS x 32 bit
Microsoft office professional plus 2010 for OS x 64 bit
MS office Full version actvitor with serial
အချိန် - 6:08 PM
Windows7manager Final
Pyae Sone | 8:33 PM | Software
Windows7manager ကိုဘာတွက် သုံးလဲဆိုရင် သူ့ကိုတင်ထားတာနဲ့ အခြား နောက်ထပ် စက်ကို Optimize လုပ်ပေးတဲ့ Tuneup Utility တို့ CC Cleaner စသည့်မည်သည့် Utility တို့တင်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူ့ကို All –in-One လို့လဲ ခေါ်လို့ရပါတယ်။ စက်ကိုလဲ သိသိသာသာမြန်လာစေပါတယ်...။ ကျန်တာကတော့ သုံးကြည့်လိုက်ရင် ပိုသိလာပါလိုက်
မယ်...။ Windows7Manager ၂မျိုးထွက်ပါတယ်..ကျနော်တို့ Window7စတင်တုန်းက Operating System 32 bit /64 bit ဆိုပြီး နှစ်ခုထဲက တခုဆီရွေးတင်ကြပါတယ်..။ သူ့အတွက်လဲ ၂မျိုးရှိပါတယ်...သူ့ကို Windows အတိုင်းအင်စတောလုပ်ရပါမယ်..ကိုယ့်ရဲ့စက်က 64 bit သမားဆို ကျနော်တင်ပေးထားတဲ့ 64 bit ဆိုတာလေးကို သုံးရပါမယ်..ကိုယ့်ရဲ့ စက်က 32 bit Operating System ဆိုရင် 32 bit ကို သုံးပါ...။ Keygen ရော Serial Key ပါထည့်ပေးထားပါတယ်... အားလုံး အဆင်ပြေကြပါစေ...။
File Size - 12.1 MB
အချိန် - 8:33 PM
US visa lottery opens for 2013 – ဂရင်းကတ် ကံစမ်းမဲ...
Microsoft Office Professional Plus 2010 ( 32 / 64 ...